China OEM Rinonhuhwira Vitamin C shawa firita katuriji Mugadziri uye mutengesi | Xinpaez
Kubvisa Chlorine - Zvinobudirira kusimudzira bvudzi rako uye mamiriro eganda
Kunhuwirira Kwemahwembero - 6 Hwema huripo
Hurefu hwehupenyu Hupenyu- 5000L yekushandisa mvura
Xinpaez VC firita (5inches, 4.5inches) inokwana mhando dzakawanda dzemaoko ekugezesa misoro uye zviri nyore kuiswa. Ingo tora kunze kwebhokisi uye pop iyo mumusoro wekugezera kana inline firita, Hapana priming inodiwa. Usati washandisa ita chokwadi kuti gomba ratemwa pamusoro pekatekiti uchishandisa tsono kana chimwe chinhu, kuti sefa rishande.
Iwe unonyatso cherekedza zviri nani bvudzi uye ganda! Yedu vhitamini c firita inowedzera pH uye inoshanda zvinobatsira kurasikirwa nevhudzi, ganda rakaoma, ganda rinonhuwa, dandruff uye eczema. Maziso matsvuku anoitika kana tsinga dzeropa padyo nepamusoro peziso dzichiwedzera uye kuwedzeredzwa. Kuwedzera kusvibiswa neklorini kana makemikari kunogona kukonzera maziso ako kutsamwiswa. Vitamin C Shower Firita ine yakawedzera kusefa iyo inoderedza inosvika 99,9% yeChlorine neChloramines kubva pamvura yako yekugeza. Meso matsvuku aigona kudzivirirwa uye vhudzi haritangi kunhuwa rakasviba zuva rinotevera sezvazvinowanzoitika usati washandisa misoro yekugezesa ine mafirita eVitamin C !! Neiyi firita, unogona kuona kuti une mvura yakapfava uye yakachena iri nani kune yako ganda nebvudzi.
Iko kukanda kuri kutenderera, saka iwe unogona kuona kuti yakawanda sei vc yasara mukati. Iwe uchaona kana iyo firita ichibva kubva kune yekutanga vara (kwete kuona-kuburikidza) kujekesa zvakakwana uye kuona-kuburikidza. Usachinje firita kusvikira iwe waona zvanyatsojeka. Ichiri chakanaka uye ichiri kushanda kana ichitaridzika kunge "isina makore" uye chimiro chemukati chakapotsa chaenda zvachose. Rima rakajeka rinokuudza kuti kuchine Vitamin C imomo. Zvinoenderana nerudzi rwekugezera musoro wauinayo. Kana isiri yekuona kuburikidza
ipapo iwe waizofanira kutora kaseji kuti uone kuti yakawanda sei VC yasara. Iyo inogara kwenguva yakareba. Iyo yekuzadza firita inoisa nyore. Iyi firita yekugezesa yakagadzirirwa kugara kwemavhiki mana kusvika masere zvakanyanya nevanhu vakuru vaviri vachishamba kamwe pazuva, kana mushure mekusefa inosvika 5000 litita emvura.
2 mitsva mhenyu inosvika inova sitirobheri mukaka uye jasmine. Parizvino pane 6 main scents aripo akazara. Mindi, Lemon, Rose, Strawberry Milk, Lavender naJasmine. Hwema hunogona kugadzirwa, Plz tiudze kuti chii chinonhuwira chaunoda zvakanyanya. Iyo inonhuwira inozorodza inovandudza pfungwa, inoderedza kushushikana, inovandudza mamiriro uye kurara mhando. Isu tinovimbisa kuti hapana zvinodzivirira mune zvigadzirwa zvedu. Ivo vakapfuma mune zvakasikwa hunhu.
Unogona kubvunza: Iko VC inotorwa kubva ku？
Kunhuwirira vhitamini C sefa makadhibhokisi ane akaomeswa echisikirwo hwemairi mafuta uye Vitamin C. Mazhinji acho iVitamin C.
Pashure: Mufashoni Mvura Inochengetedza Ruoko Shower Musoro
Zvadaro: OEM PP Cotton yekugeza musoro cartridge firita Core
Usazviomesera PVC Shower Hose